नमस्ते ! मेरो नाम उज्वल हो र म एक विवेकशील नेपाली बन्ने कोशिशमा छु :)
नमस्ते ! मेरो नाम उज्वल हो र म एक विवेकशील नेपाली बन्ने कोशिशमा छु
About Ujwal in English
नमस्ते ! मेरो नाम उज्वल हो। म नेपालको राजनितिक, सामाजिक र आर्थिक वातावरण सुधार्न नेपालीहरुलाई संगठित गर्दैछु र यसको लागि चाहिने नेतृत्वहरु बनाँउदैछु। हाम्रो देशको लागि मेरो दुरदर्शिता यहाँ पढ्नुहोस् । धन्यवाद 🙂
यो रहयो मरो छोटकरीमा कहानी। सारंशमा भन्नु पर्दा म एस्ट्रो-फिजिक्स पढ्न अमेरिका गा को मान्छे, एक वेब साईट बनाउने डिजाईनर (कलाकार) भएर फर्के।
जिन्दगी देखि वाक्क भएर भिक्षु बन्छु सोचेको थिएँ तर उद्दमी बन्न पुगेँ। अरु सँग टाढा एक्लै बस्न रुचाउने म, अहिले हजारौँलाई एउटै सामुहिक सन्जालमा ल्याउँदैमा व्यस्थ छु।
अहिले नेपालको यो गाह्रो परिष्थितिमा म नेपालीहरुलाई कसरी एक बनाई देशलाई संमृद्ध बनाउनको निमित्त राजनितिबाटै नेपालीहरुलाई निकास दिनुपर्छ भनेर “विवेकशील नेपाली” नामक नविन राजनितिक शक्ति बनाउन कम्मर कसेको छु, सयौँ सक्षम युवा अगुवा साथीहरु सँग मिलेर।
अनि यसो हेरेँ आफ्नो मार्कसिट। खितिखिति मन देखि नै हासोँ लाग्यो । आधा भन्दा बढि साथीहरुलाई मैले जितेछु। सबै मुर्छै परे। ‘अँग्रजी साहित्यमा कार्टुन बनाएर आधा भन्दा साथीहरुलाई जितेको’ कुरा पत्याउने कि नपत्याउने। किन ?कसरी ? – अहिले सम्म थाहा पाईएन तर आज पनि स्कुलका साथीहरु भेट्यौँ भने त्यहि कुरा निकाल्छन्। 🙂 पछि यहिँबाट म अमेरिकामा छात्रबृतिका साथ पढ्ने मौका पनि पाँए । जे हुन्छ राम्रै हुँदो रहेछ !
म भगवत् गितामा भने झैँ ‘कर्मयोगी’ हुनुमा पूर्ण विश्वास गर्छु। मलाई चाहिँ अलि गाह्रो कर्म दिएको जस्तो लाग्छ भगवानले। मेरो कर्म चाहिँ अरुको दिमाग घोँची राख्ने 🙂 अँग्रजीमा “प्रोभोक गर्ने” भन्छन् क्यार यसलाई। “अहिले नगरे कहिले, हामीले नगरे कस्ले” म सबैलाई यहि भन्छु र देखाएर धकेल्छु।म यो बिचार राख्दछु –
“हामीले यो धर्तिमा आएपछि केहि गरेरै जानै पर्छ। हामी हरेकले आ-आफ्नै एउटा विशेष कर्तव्य बोकेर आएको हुन्छौँ। यदि त्यसो गरेनौ भने जिन्दगी अधुरै भएर भौतारिदैँ हिड्छौँ।”
प्रश्न वा प्रतिक्रिया ?(required)
विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक अध्यक्ष उज्वल थापाको बारेमा रोचक जिन्दगी पढन यहाँ जानुहोस् | Madan khaday says:
[…] http://www.whynepal.com/ujwal-nepali/ […]